China Rakajeka Solid Wood Yakakwira uye Yakadzika Padivi Kabhodhi Yekuchengetedza Cabinet # 0024 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Nyore Solid Wood Yakakwira uye Yakadzika Padivi Kabhodhi Yekuchengetedza Cabinet # 0024
Zita: Makamuri ekugara
Muenzaniso nhamba: Amac-0024
Saizi: Type A: 400 × 450 × 800mm
Rudzi B: 400 × 450 × 1050mm
Iyo huru furemu ndeyemhando yepamusoro oak
Haasi matanda ese anonzi machena oak. "Maorenji akaberekerwa muHuainan maorenji, nepo iwo akazvarwa muHuaibei ari maorenji." Kunyange huni huni iri yemhuri imwechete seyakachena oak, nekuda kwekuganhurirwa kwemamiriro ekunze uye nharaunda munzvimbo yainokura, tsanga dzayo dzehuni dzakatetepa, mitsara mitema, uye vanga. Kana uchisarudza chaiyo oak fanicha, iyo yakanakisa zvinhu inofanirwa kunge iri chena oak, uye iyo fenicha yatinogadzira inogadzirwa yemhando yepamusoro yakatengwa kuNorth America chena oak isina yekugadzira ganda.
Yakapoteredzwa dhirowa nzvimbo
Iyo yakavharirwa dhirowa nzvimbo inokubatsira iwe kurongedza nekuichengeta, uku uchidzivirirawo zvakavanzika zvako. Iyo groove dhizaini yedhirowa mubato inokupa iwe yakawedzera pfungwa yekuchengeteka. Iyo yemukati yakateteka uye yakati sandara, uye haizokwikwidzwe kunyangwe ukaisa mbatya nyoro pairi.
Makona akakomberedzwa ane tenon uye tenon chimiro
Mugadziri akafemerwa kufemerwa kubva kuKorea fanicha uye akabatanidza hunhu hweChinese fanicha kugadzira Nordic fanicha. Mitsara yakapfava uye isina kusimba, akanaka miouki mapatani, anotyora kusviba, uye hapana kushaikwa kwekunakisa kwakanaka mukureruka. Iyo yechinyakare tenon-uye-mortise chimiro inounza iwe kudzoka kune chaicho uye zvakasikwa nyika.
Bold solid huni inodzora makumbo ehabhineti
Iyo gobvu rakasimba huni inokomberedza makumbo ehabhineti akagadzirwa aine anonzwisisika ekurerekera kona maererano nemutoro hunhu hwekabati, izvo zvinowedzera huremu hwekutakura. White oak kubva kuUnited States ine mamwe mapatani akanaka, akapfuma magadzirirwo, diki mutsauko musiyano, uye rakapedzwa ruvara rwehuni nderwesango uye rakachena. Iko hakuna kushongedzwa kwakawandisa uye zvipingamupinyi, huni dzakasimba dzakasimba dzichiri kushandiswa mune izvo zvinhu, uye kushongedzwa senge zvakavezwa arcs zvakaderedzwa mukugadzirwa. Mitsara yakapusa inodudzira runako rwekureruka.
Dhirowa dzakagadzirwa nemashizha akasimba ehuni
Iyo yemukati yedhirowa inotora matanda anotungamira njanji, izvo zvisiri nyore kukuvara, uye kana ichinyanya kushandiswa, iri nyore. Kudhonza hakuna basa uye hakuunzi ruzha.
Nordic maitiro akaoma huni waini kabhineti
Nordic chimiro chakasimba huni waini kabhineti, kuratidza chengetedzo, ese ekushongedza kukosha uye ekuchengetedza basa. Pane maviri saizi aunosarudza. Iyo hombe bhodhi yakatwasuka uye izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa ndezvechokwadi. Kuvhura kupfapfaidza kunochengetedza maratidziro emouki kusvika padanho rakakura, uye iwe unogona kutonzwa iwo maratidziro emumhanzi neruoko.
Pashure: Sup Surfboard Yakakweshwa Mira kumusoro Paddle Bhodhi 0370
Zvadaro: Yakakwira mhando yakasimbiswa surfboard brushed zvinhu SUP paddle board 0371
Chivako Chekuchengetera Kabineti
Kona Yekuchengetedza Cabinet
Kicheni Pantry Kuchengetedza Cabinet
Kunze Kwekuchengetedza Cabinet
Rolling Kuchengeta Cabinet
Kuchengetedza Kabineti Isina Mvura
Magetsi Ekuchengetedza Cabinet
Wood Kuchengeta Makabati
Imba Yakanaka 2-Chikamu Mudiki Mhuka Modular Habitat ...